ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၂ နှစ်ပြည့် | Ko Oo + Ma Thandar
« ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း သို့ထပ်ဆင့်တုံ့ပြန်ချက်
ဖိလစ်ပိုင် အမတ် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ »
ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၂ နှစ်ပြည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၂ နှစ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းရှိ ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့ အုတ်ဂူကို သွားရောက် ဂါရဝပြုပါတယ်။ သတင်း အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်ကြည်အား အဖဦးဖိုးညှင်း၊ အမိဒေါ်ဖွားစုတို့မှ ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် မြောင်းမြမြို့ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် All Femal ABM High School (ယခု အထက (၁) ကြည့်မြင်တိုင်) မှ သူနာပြုဒီပလိုမာ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
သူ့ခေတ်သူ့အခါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ သြဇာအကြီးဆုံး အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ မှ ၁၉၅၂ အထိလွှတ်တော်အမတ်၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများအသင်းဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားသော လူမူအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀-ခုနှစ် တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး နီပေါနိုင်ငံသံအမတ်အဖြစ်လည်း ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရက ဒေါ်ခင်ကြည်အား မဟာသီရိသုဓမ္မဘွဲ့ကို ချီးမြင့်ခဲ့သည်။
ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ် မှ …..
This entry was posted on December 27, 2010 at 1:34 pm and is filed under အမှတ်တရ, ဖြန့်ဝေခြင်း.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.